Student Pass လျှောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ - Myanmar in Singapore
Posted by Admin Team on July 6, 2009 at 4:20am in ကျောင်းကိစ္စနှင့် သင်တန်းများ
အရင်က မြန်မာတွေဟာ Poly တက်ဖို့သာ အဓိက အာရုံစိုက်နေခဲ့ကြပေမယ့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များရဲ့ နှောင်းပိုင်းကစလို့ Secondary ကျောင်းတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ အပြင်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာလည်း ပညာသင်ကြားလာကြပါတယ်။ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေ၊ လူခံကောင်းကောင်းရှိသူတွေက ကလေးငယ်တွေကို Secondary က စပြီး စင်ကာပူပညာရေးနဲ့ ရင်းနှီးစေခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ ကလေးငယ်တွေကို Primary ဒါမှမဟုတ် Secondary ကျောင်းလာတက်စေချင်တယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းအောင်လက်မှတ်တွေနဲ့တကွ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ကျောင်းကို တင်ပြရပါတယ်။ ကျောင်းကလက်ခံတဲ့အခါမှာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ သင်္ချာကို ဝင်ခွင့်ဖြေရပါတယ်။ (တချို့ကျောင်းတွေကတော့ သိပ္ပံဘာသာတွဲကိုလည်း ဖြေခိုင်းပါတယ်) အဲဒီအဖြေပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်အဆင့်က စတက်ရမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ Student Pass လျှောက်ထားပေးပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ စင်ကာပူ ပညာရေးရေစီးကြောင်းတလျှောက် တဆင့်ပြီး တဆင့်တက်သွားရုံပါပဲ။ Poly တက်ချင်သူတွေအတွက်ကတော့ လမ်းရိုးကြီးတွေဟာ အလုပ်ဖြစ်ဆဲလို့ ဆိုရမှာပါ။ မြန်မာပြည်က Poly အသိအမှတ်ပြု Agent တွေကနေ တဆင့် ဝင်ခွင့်ဖြေပြီး တက်ရောက်ခွင့်ရကြတာဟာ အသုံးဝင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ပိုများတယ်ဆိုပေမယ့် အစစအရာရာ စီစဉ်သင်ပြပေးလို့ စင်ကာပူနဲ့ စိမ်းသေးရင် အဲဒီနည်းလမ်းက အလွယ်ဆုံးပါပဲ။ နောက်တမျိုးကတော့ Online ကနေလျှောက်လွှာတင်၊ ကျောင်းကလက်ခံရင် စင်ကာပူမှာ ဝင်ခွင့်လာဖြေလို့ရပါတယ်။ ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက် ဆယ်တန်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာနဲ့ သိပ္ပံတွေမှာ အမှတ်ကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ဝင်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာလည်း အစိုးရ ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့တဲ့အတွက် ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ကိုသာ ကျောင်းသားကပေးရပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီအနည်းငယ်ဟာ မိဘတွေအတွက် မနည်းလှသေးပါဘူး။ ထောက်ပံ့ကြေးယူသူတွေဟာ Poly ပြီးတဲ့အခါ စင်ကာပူမှာ ၃ နှစ်ပြန်အလုပ်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ထိုးရပါတယ်။ အလုပ်စဝင်တာနဲ့ ကျောင်းကနေ PR လျှောက်ထားခွင့်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Poly လမ်းကြောင်းဟာ ဖြောင့်ဖြူးဆဲပဲလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတော်တော်များများဟာ အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားလက်ခံခွင့်ကို ရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိတာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ အဓိကက Security Deposit လို့ခေါ်တဲ့ စင်ကာပူအစိုးရကို ပေးထားရတဲ့ အာမခံကြေးကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ Singapore Quality Class (SQC) လက်မှတ်ကို အစိုးရအသိအမှတ်ပြု အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ Industry အမျိုးမျိုးကို ချီးမြှင့်ပါတယ်။ အဲဒီ SQC လက်မှတ်ရပြီးသားကျောင်းတွေမှာ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေ Student Pass နဲ့ ကျောင်းလာတက်ရင် Deposit တင်စရာမလိုပါဘူး။ မရှိရင်တော့ မြန်မာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅ ထောင်လောက်တင်ရပါလိမ့်မယ်။ Student Pass ပြန်အပ်တာနဲ့ ၁၀၀% ပြန်ပေးပါတယ်။ ကျောင်းတချို့နဲ့ ရန်ကုန်မှာ ရုံးခန်းဖွင့်ထားတဲ့ Agent တချို့က အဲဒီကိစ္စကို နောက်ဆုံး Student Pass ကျမှ ဖွင့်ပြောတတ်ကြတဲ့အတွက် သတိထားပြီး မေးသင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု အရေးကြီးတာက တကယ်လို့ Student Pass အဆင်မပြေရင် ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လောက်ပြန်အမ်းမလဲဆိုတာလည်း အစကတည်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားသင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိထားသင့်တဲ့ အချက်ကတော့ Part Time အလုပ်ထွက်လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရကျောင်းသားတွေဟာ သတ်မှတ်တဲ့ နာရီအကန့်အသတ်အတွင်း တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ လုံးဝအလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့အပြင် ကျောင်းခေါ်ချိန်ပြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ တရားမဝင် အလုပ်ထွက်လုပ်နေတာ တွေ့ရင် ဒဏ်ကြေး ၅ ထောင်လောက်ဆောင်ရတတ်ပြီး မိခင်နိုင်ငံကိုတောင် ပြန်ပို့တတ်ပါတယ်။မောင်ပွတ် Tags: စင်္ကာပူလာမည့်သူများအတွက် Like0members like this
Permalink Reply by Khin Maung Soe on August 20, 2009 at 2:36pm Hi! This is Khin Maung Soe form Yangon.I would like to join MBA at NUS university and work at the same time in Singapore. Please help me what should I need to prepare.Thanks. Please help me.I have got my passport but I have apply for visa. I have no idea. Pls help me.
Permalink Reply by kkhaing on September 16, 2009 at 8:53am Hi all fris....I mastudent of Nanyang Technology University who is holding student pass.... If u would like to get any info, any instructions about schooling, u can read carefully at sch website which one u like it depend on. This is the best way to get actually information as well as school fees, accomodation, taken subjects, apply period etc...
Khin Maung Soe said:Hi! This is Khin Maung Soe form Yangon.I would like to join MBA at NUS university and work at the same time in Singapore. Please help me what should I need to prepare.Thanks. Please help me.I have got my passport but I have apply for visa. I have no idea. Pls help me.
Permalink Reply by Htet Aung Phyo on September 16, 2009 at 12:46pm HI! I am Htet Aung phyo who lives in Yangon. I would like to attend to the singapore and work at the same time in there ..
Please help me how to do ... I haven't got my passport . Please help me how to get this and VIsa ... I have no idea..
I wait for your replying .....
Thank you for your inviting .......
Permalink Reply by FreeMan on September 17, 2009 at 10:34pm My biggest wish is being human life, everybody should stay meaningful.
Permalink Reply by nyinyi on September 28, 2009 at 7:44pm မိတ်ဆွေအားလုံးခင်ဗျာ... စင်ကာပူတွင်အလုပ်တဘက်နဲ့ကျောင်းတတ်နိုင်ရန်အတွတ် မည်ကဲ့သို့ စုံစမ်းရပါမလဲ
နောက် ဘယ်လိုကျောင်းမျိုးတွေကို လျှောက်ထားသင့်ပါသလဲ။
ကျောင်းလျှောက်ရာတွင် ဘယ်လို လိုအပ်ချက်မျိုးလိုအပ်ပါလဲ
သိသောသူများ တင်ပြပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
Permalink Reply by mydaydream on January 13, 2010 at 6:15pm ISS ကို Internet ကနေ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ရေးဖြေဝင်ခွင့်စာမေးပွဲနဲ့ လူတွေ့ သို့မဟုတ် ဖုံးအင်တာဗျူးဖြေရပါတယ်။ သင်တန်းကာလတစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး Poly လိုပဲ ကျောင်းပြီးတဲ့အခါ PR လျောက်ဖို့ offer letter ရပါတယ်။
ဖုံးအင်တာဗျူးမဖြေရတာ ကြာပဲကြာလှပြီဟာကို။ ခုရေးဖြေရော အင်တာဗျူးရော စလုံးမှာပဲ ဖြေရပါတယ်ရှင်။ ကွန်ပျူတာဘွဲ့ရမဟုတ်ရင် အရွေးခံရဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ၁၀ယောက်မှာ ၈ယောက်က ကွန်ပျူတာဘွဲ့ရကိုပဲရွေးပါတယ်။ (မြန်မာပြည်ကဆိုရင်ပြောတာပါ)။ တကယ်လို့ နှုတ်ဖြေရော ရေးဖြေရော ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိပြီး အရွေးမခံခဲ့ရရင် အသနားခံစာတင်လို့ရပါတယ်။ ဘာမှထွေထွေထူးထူးလုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုဘာလို့ရွေးသင့်လဲဆိုတာ အကြောင်းပြချက် ခိုင်ခိုင်မာမာရေးလိုက်ပြီး မေးလ်နဲ့ပို့လိုက်ရုံပဲ။
Permalink Reply by U Aung Khin on June 16, 2010 at 10:52pm တစ်ခုလောက် ကူညီပါ။
ကျွန်တော့သားက အခု ရန်ကုန်မှာပါ။IADCS ပြီးပါပြီ။ BCIS ကို စက်ာပူမှာတက်ချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်၊ဘယ်company နဲ့ ဆက်ရမယ်။ ဘယ်လိုကျောင်းတွေ၊ လစာဘယ်လို ၊ဘာတွေ ပြင်ဆင်ရမယ်။
Permalink Reply by Thin Thin Nyunt on July 12, 2010 at 12:37am hello sis, I am Thin Thin who is working here singapore. I am also B.C.Sc. Now My Job is not OK.
So I want to try ISS for new better career.I already check NUS website but I didn't clear.
Can u help me and give me Interview Question for ISS interview and Some lessons for entrance exam.
*****And Now I hear after finish ISS they will not give PR offer letter for us.This news is true or false?
*****I want to know after6months how much salary income we will got for OJT5months?
pls pls pls sis, Thank alot
ms.thinnyunt@gmail.com if possible pls contact these mail
mydaydream said:ISS ကို Internet ကနေ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ရေးဖြေဝင်ခွင့်စာမေးပွဲနဲ့ လူတွေ့ သို့မဟုတ် ဖုံးအင်တာဗျူးဖြေရပါတယ်။ သင်တန်းကာလတစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး Poly လိုပဲ ကျောင်းပြီးတဲ့အခါ PR လျောက်ဖို့ offer letter ရပါတယ်။ ဖုံးအင်တာဗျူးမဖြေရတာ ကြာပဲကြာလှပြီဟာကို။ ခုရေးဖြေရော အင်တာဗျူးရော စလုံးမှာပဲ ဖြေရပါတယ်ရှင်။ ကွန်ပျူတာဘွဲ့ရမဟုတ်ရင် အရွေးခံရဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ၁၀ယောက်မှာ ၈ယောက်က ကွန်ပျူတာဘွဲ့ရကိုပဲရွေးပါတယ်။ (မြန်မာပြည်ကဆိုရင်ပြောတာပါ)။ တကယ်လို့ နှုတ်ဖြေရော ရေးဖြေရော ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိပြီး အရွေးမခံခဲ့ရရင် အသနားခံစာတင်လို့ရပါတယ်။ ဘာမှထွေထွေထူးထူးလုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုဘာလို့ရွေးသင့်လဲဆိုတာ အကြောင်းပြချက် ခိုင်ခိုင်မာမာရေးလိုက်ပြီး မေးလ်နဲ့ပို့လိုက်ရုံပဲ။
Permalink Reply by yee mon kyaw on July 30, 2010 at 6:36pm hi uncle,
My name is Yee Mon who is attending Master Of Information Studies in NTU. Your son should be attend his 3rd year (BCIS) in Yangon or YadanarPon. After that, he should join to Singapore for his Master Degree. There are2Government Universities which are NUS and NTU. You can be directly apply to the universities from online. Please email me if you have any question to ask me. My mail address is yeemonkyaw85@gmail.com and ph no is 93602270.
U Aung Khin said:တစ်ခုလောက် ကူညီပါ။ ကျွန်တော့သားက အခု ရန်ကုန်မှာပါ။IADCS ပြီးပါပြီ။ BCIS ကို စက်ာပူမှာတက်ချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Permalink Reply by Shwe Yi Win May on March 4, 2011 at 8:16pm PR Offer လဲမရတော့ပါဘူး
Permalink Reply by Michael Bway on March 27, 2012 at 4:55pm စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုရင် ဒီမြန်မာနိုင်ငံက ဘွဲ့လက်မှတ်တွေ ဘယ်လောက်ထိ အရေးပါ၊ အသုံးဝင်သလဲ ဆိုတာသိချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က အခု Electrical Power (BE) တက်နေပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ အလုပ်ရဖို့ BE ဘွဲ့ နဲ့ ME ဘွဲ့ ဘယ်လောက်ထိ ကွာသလဲ ဆိုတာလဲ သိချင်ပါတယ်။
Permalink Reply by nyiwinthant on April 5, 2012 at 7:52pm Hi i am finished BE student of electronics and communications and i intend to attend NUS or NTU so please tell me how do i prepare and what things i should do and how do i apply.